မလေးရှားဒုက္ခသည် လဲလှယ်ရေးသည် ပိုပြင်းထန်လာ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← မလေးရှားရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အထူးသတိပြုရန် အချိန်တန်ပြီ
ဒုက္ခသည် လှဲလှယ်ရေး သဘောတူစာချူပ် တနင်္လာနေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသွားမည် →
ဂျော်န်မီနာဂျူးမှ ဆစ်ဒနီရင်ပြင်အဖွဲ့ (Sydney Forum) အား ယခု အပတ်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့မှုတွင် ၄င်း၏ ဗီယက်နမ် ဒုက္ခသည် အရေးအား ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ အတွင်း ဖြေရှင်းခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံမှ ယခုမလေးရှားနှင့် ဒုက္ခသည်လဲလှယ်ရေး အပေးအယူသည် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း တခုဖြစ်ကြောင်း အတော်အတန်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က သိန်းနှင့်ချီသော ဗီယက်နမ်ဒုက္ခသည်များ အားပြန်လည်နေရာချထားမှုတွင် မလေးရှား၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုသည် အလွန်အရေးပါခဲ့ကြောင်း ၄င်းမှဆိုခဲ့သည်။
မလေးရှား၏ ၄င်းနိုင်ငံတွင်းရှိလူများကိုကိုင်တွယ်မှုအား မိမိတို့၏ဝေဖန်မှုတွင် လူမျိုးရေး ပါဝင် နေသော်ငြားလည်း မလေးရှားအနေနှင့် ထိုသူများအား ပိတ်လှောင်မှုမပြုခဲ့ကြောင်း ၄င်းမှဆိုခဲ့ သည်။ ဂျော်န်မီနာဂျူးမှ သြစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ် ဂျူလီယာဂီးလတ် (Julia Gillard) နှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တိုနီအက်ဘော့တ် (Tony Abbot) တို့အား ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးဆောင်မှုကင်းမဲ့နေသည်ဟု ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ခရစ်စမတ်ကျွန်းပေါ်ရှိ ဆန္ဒပြသူများအား လေဘာအစိုးရမှ မျက်ရည်ယိုဗုံးဖြင့်ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းမှာ ပြင်းထန်လွန်းပြီး တိုနီအက်ဘော့တ် မှာမူ ပိုဆိုးကာ ပါတီနှစ်ခုပေါင်းကာ ဒုက္ခသည်များအား ထိုးနှက်ချက်သည် ၄င်း၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် မလေးရှားဒုက္ခသည်လဲလှယ်ရေးသည် ပြင်းထန်သည့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများ အရေး ဆိုင်ရာ အချေအတင်ဆွေးနွေးမှုကို လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေစေမှုအား အဆုံးသတ်စေခဲ့ကြောင်း ကိုမူ ဂျော်န်မီနာ ဂျူးမှဝန်ခံခဲ့သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့၏ ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေး အာမခံချက်များသာမရှိခဲ့လျှင် ဗီယက်နမ် ဒုက္ခသည်များအား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဂျော်န်မီနာဂျူးမှ ဆိုခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်အနားယူခဲ့သော ယခင် လက်ထောက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဖြစ်ခဲ့သူ အာဂျာကက်စ် ကီနမ်မီ (Arja Keski-Nummi) မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်လျှင်မူ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ ဥပဒေထုတ်ပြန်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ယှဉ်လျှင် မလေးရှားနိုင်ငံ သည်ရှေ့သို့ရောက်နေကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
Posted on July 19, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.